जीवनशैली • nepalhealthnews.com
न्युट्रास्युटिकल्स आफैंमा बृहत् अर्थ बुझाउने शब्द हो जसले खाद्य स्रोतबाट निकालिएको, पोषणयुक्त र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त फाइदा पुर्याउने उत्पादन भन्ने बुझिन्छ । यो शब्द दुइवटा शब्दहरु न्युट्रेन्ट (पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ) र फर्मास्युटिकल्स (औषधियुक्त पदार्थ) मिलेर बनेको छ ।
मोबाइलको अत्यधिक प्रयोग स्वास्थ्यका लागि घातक
मोबाइलको प्रयोगले सुविधासँगै समस्या पनि निम्त्याएको छ । मोबाइल सेटबाट निस्कने रेडिएसनले स्वास्थ्यलाई असर पुर्‍याइरहेको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ । यस्तो असरबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कैयौँ अध्ययन र अनुसन्धान भएका छन् । तर, स्पष्ट जवाफ
यसरी गरौँ जाडोमा वृद्धवृद्धाको हेरचाह
सामान्यतया ६५ वर्ष पुगिसकेपछि शरीरमा प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुँदै जान्छ । फलस्वरूप जाडोमा रोगको संक्रमण पनि बढ्छ, जस्तै– शरीरको तापक्रम घट्दै जानु, मुटुसम्बन्धी रोगले सताउनु, श्वासप्रश्वासका समस्या देखिनु आदि । तसर्थ, जाडो महिनामा वृद्धवृद्धाको हेरचाहमा सचेत रहनु आवश्यक हुन्छ ।
बी एण्ड बी अस्पतालमा शुरु गरिएको मुटु विभागमा यतिखेर अत्याधुनिक इन्भेसिव र ननइन्भेसिव सेवाले निरन्तरता पाइरहेको छ । इन्भेसिव अन्तर्गत धेरैले क्याथल्यावको सेवा लिँदै आएका छन् । ननइन्भेसिवमा इ.सी.जी., इको, एविपी, हल्टर, टी.एम.टी सेवा पाइरहेका छन् ।
रातो र पोलेको मासुको फाइदा भन्दा हानी धेरै
नेपालीको महानपर्व बडादशैँमा आवश्यकताभन्दा निकै धेरै मासु उपभोग हुने गर्दछ । पर्वका नाममा धेरै मासु खाँदा मानिसको स्वास्थ्यमा सामान्यदेखि जटिल खालका रोगको जोखिम हुनसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । मासुसँगै मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर
बिरामीको पीडा बुझ्ने डाक्टर
प्रा.डा. शर्माले युरोलोजीमा सेवा दिन शुरु गर्नुभएको २० वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा सानो ठूलो गरी करिब २० हजार भन्दा बढी बिरामीले उपचार सेवा लिन सफल भइसकेका छन् । प्रा.डा.शर्मा अहिले पनि दैनिक व्यक्तिगत करिब ३०
पिसाब रोकेर नबस्नुस्
पिसाब शरीरको सामान्य प्रक्रिया भएकाले पिसाबबाट शरीरका लागि अनावश्यक विकार तत्वहरु बाहिर निस्कन्छ । त्यसैले आफूलाई महसुस भएको एकदेखि दुई मिनेटभित्र पिसाब बाहिर फ्याँक्नुपर्छ । पिसाबथैली भरिने बित्तिकै स्नायुप्रणालीले त्यसको संकेत मष्तिष्कमा पु¥याउने भएकाले पिसाब फेर्न मन
बच्चामा ब्रेन पावर बढाउने १३ मन्त्र
के सबैदिन पढेरपनि परिक्षामा तपाइको बच्चाको थोरै नम्बर आउछ ? पठक पटक पढ्दापनि उसलाई केही याद रहदैन ? दिक्क नहुनुहोस् । तपाइको बच्चाको मेमरी पावर बढाउन सजिलो उपाय बताइ रहनु भएको छ स्वैता सिंहले । स्टडी प्रेशर
अध्यात्मभित्र लुकेको समग्र स्वास्थ्य
‘म भन्दा कोही अघि जालान्’ र ‘म पछि पर्छु कि’ भन्ने हामीमा प्रतिस्पर्धाको नयाँ रोग सिर्जना गरिरहेका छौं । यो संसार नै एउटा घुमिरहने वृत्त एवं चक्र हो । यहाँ त अगाडि पछाडि भइरहन्छ । तुलना तुलना
महिनावारीको दुःखाइ हृदयघातको दुःखाइ भन्दा बढि
महिनावारी अर्थात् रजस्वला हुँदा गर्भाशयमा रहेको रगतको सतह महिनै पिच्छे योनीद्वारबाट बग्ने गर्छ । रजस्वला प्राकृतिक र पूर्णरुपले महिलामा हुने सामान्य जैविक प्रणाली हो । एउटा केटीको पहिलो रजस्वला ९ देखि १६ वर्षको उमेरमा हुन्छ । सामान्य